5 Kwakanaka Boka Mizinda muEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Kwakanaka Boka Mizinda muEurope
Europe nhare uye fadza migwagwa uye nzvimbo dzave kurongedzwa kune zvinoshamisa ngano kwezviuru zvemakore. Kusvika nhasi Europe ndiyo quintessential yebato kuenda munyika. Iyo ndiyo mecca yemapato kune vafambi vanobva kutenderera pasirese like bachelor uye bachelorette rwendo. saka, takasarudza neunyanzvi zvakanakisa 5 mapato emapato muEurope kwezve epic uye yemusango zororo.
Berlin kuna Amsterdam, kuparadza marariro kuenda kune makuru makuru ehusiku muEurope, kubudikidza chitima kufamba kana kirabhu hopping, sunga bhanhire rako pachigaro chakashata parizvino.
Njanji Kufamba Ndiyo Yakanyanya Eco-Inoshamwaridza Nzira Yekufamba muEurope. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel neSave A Train, The Akachipa Kwazvo Zvitiketi Iwe Webhusaiti Munyika.
1. Bato MuBerlin, Jerimani
Rimwe remaguta ane hushamwari muEurope, Berlin ndiyo mecca yeaartist, musicians, uye ma DJs epamusoro yenyika. Nhoroondo yaro uye tsika zvakapesvedzera kusiyana kwayo uye nzira yakavhurika kwazvo, zvinoreva kuti chero zvoenda. saka, Berlin ndiro rakasarudzika uye rakanakisa guta mutambo muEurope.
Bhurawu reBerlin nemabiko epati zvinowanzo tanga kusvika kwasviba. Kana iwe uchida kunzwa hupenyu hwehusiku hwaBerlin seBerliner, rongedza shangu dzakanaka, kupfeka zvakajairika uye kusvika neChishanu. Tora chinwiwa kune imwe yemabhawa mazhinji muBerlin uye unanga kunzvimbo yekumaindasitiri.
Makirabhu akanakisisa muBerlin akavanda kure munzvimbo yemabhizimusi yeBerlin uye pasi pezvitima zvechitima. Zvigadzirire iwe wepati risingambomira, kana kumira chete kana murume wekupedzisira akamira. Husiku hwekuBerliners 'kubhejera husiku hunotanga kutanga 1 ndiri Mugovera kusvika Svondo manheru. This definitely puts Berlin in the craziest and best party cities in Europe with tourists and clubbers traveling from all over the world.
Ndeipi Yakanakisa Nightclub MuBerlin?
Kana iwe uchikwira 48h yekubatana uye uine nguva yekirabhu imwe chete, wozove nechokwadi chekubatirana paBerggin. Yakanakisa techno neimba imba zvinonzwika zvekutamba pasi yekutamba vhiki rese rakareba.
2. Bato MuBudapest, Hangari
Pakati pezuva uye maawa ekuvira kwezuva, Budapest ndeyechokwadi yakakwenenzverwa neakaomerera ayo ezvekuvaka matombo nemasaiti. Sezvo iwe unofamba uchifamba munzira, maziso ako haatombo cherekedza nzvimbo dzinoyevedza muEurope. asi, manheru iwe unowana imwe nyika yakasarudzika, a world of derelict buildings that turn to Europe’s most unusual bars, uye iyi yakasarudzika chiitiko inoisa Budapest pane yedu 5 akanakisa maguta epati muEurope.
Mushure merima, mune imwe nzvimbo, ipo pasina hunhu kana mitemo yemumba, zvinhu zvinongoenda kusango.
Ndeipi Yakanakisa Nightclub In Budapest?
Chakarerusa gadheni chiratidzo cheparutivi chekuparadza chaBudapest mudunhu 7 uye iyo labyrinthine chikamu chepamusoro uye inofanirwa-kushanyira kune inonyanya kushungurudza ruzivo rwebato reBudapest.
3. Bato MuPrague, Czech Republic
Prague ndiro rimwe remaguta akanaka kwazvo muEurope. Pakati pezuva iwe uchanzwa sekunge iwe wakadzokera munguva kumatunhu, machinda, and knights stories, asi pakati pehusiku iwe nguva yekufamba kuenda kune unopenga husiku hupenyu, pane inhibitions inosara shure kwemusuwo.
Guta rizere neminda yemabhebhi parwizi, Pubs, nembariro nezviratidzo zvinoshamisa zveguta uye zvechokwadi rakaipa kirabhu mamiriro.
Ndeipi Yakanakisa Nightclub In Prague?
Prague ndiyo imba yekirabhu mikuru muEurope, iyo 5-nyaya Karlovy Lazne Club. saka, kana uri kuronga rwendo rwekuenda kuPrague neshamwari dzako kana Eurotrip yekuongorora maguta epamepepuru eEurope, zvino ichi ndicho chinofanira-kumira pane yako adventure. Ziva kuti ukangopinda nemikova yekirabhu, unogona kubuda munhu akasiyana zvachose chero chinoitika muPrague, anogara muPrague.
4. Bato MuAmsterdam, The Netherlands
Yakakurumbira yemahombekombe ayo akanaka uye kofi zvitoro, Amsterdam ndeye yakakurumbira European kuenda kuzororo. Iyo ine runyararo kwazvo vibe, kunyangwe ine mbiri dzisingazivikanwe mwenje redunhu uye kofi mashopu.
Ipo maDutch anofarira kuungana-kiyi kuungana, kana iwe ukabvunza vashanyi vanobva pasi rese, vangazoti Amsterdam ine rimwe divi. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, muAmsterdam, iwe unowana zvinonzwika zvinonakidza mumakirabhu mazhinji, asiwo mhenyu mumhanzi. Kuratidzwa kweapamoyo kwakakurumbira kwazvo muAmsterdam.
Ndeipi Yakanakisa Nightclub In Amsterdam?
Chete mashoma emakhile mimhanzi mimhanzi melkel Melkweg uye Bimhuis, uye makirabhu ehusiku akanakisa ndeDe Marktkantine naSherter.
5. Bato MuVienna, Ositiriya
Guta ratinoziva tese nekuda kweasati yamboitika opera uye hupenyu hwetsika zvakare hune hupenyu hunonakidza uye hunonakidza. Kupesana nezvimwe zviitiko zveusiku husiku mune nyika dzakavakidzana, iyo yehupenyu husiku muVienna ishamwari uye inowedzera kugadzikana. Semuyenzaniso, iyo yekubhadhara mari yekupinda muVienna yakaderera neyakagadziridzwa masuo marongero.
In Vienna, iwe unogona kunyanya kuwana techno makirabhu, asi zvakare pasi pevhu uye acid zvitaera mune mamwe makirabhu.
Ndeipi Yakanakisa Nightclub In Vienna?
Kune akanakisa techno mapato enda kuDas Werk uye Grelle Forelle. Kana iwe uchida chikirabhu chinokambaira wobva unanga kuGourge, mugwagwa unofamba nepakati peguta. Ndimo iwe kwaunowana mazhinji pubs nemakirabhu akabatanidzwa pamwechete. Ive nechokwadi chekutarisa Venster99.
Elektro Gonner muenzaniso wakanaka weVienna's quirky nightlife. Inowanikwa muchitoro chemagetsi, zvakare inzvimbo yekuisirwa mavhidhiyo uye mumhanzi we-electro. Le Loft bar iri kumusoro kweSofitel Vienna Stephansdom ine epic zuva uye maonero eguta.
More Ruzivo Nezve Mapati MuEurope
Ndeipi Mwaka Mwaka Yakanyanya Kunakisa Kune Hupenyu Husiku MuEurope?
Kuputika uye kutanga kwemwaka ndiyo mwaka wakanakisa wekufamba uye uwane iwo emapati emapati muEurope.
Ndeipi Iyo Iyo Mutengo Rangeti Yekupinda Mari muEuropean Nightlub?
Mari yekupinda inosiyana nyika nenyika. Mazhinji maguta eEurope ari kudhura zvakanyanya, semuyenzaniso, Prague uye Budapest, 5-20 euros entrance and alcohol at reasonable prices, dzimwe nzvimbo dzinodhura, asi chakanyanya kukosha, kuuya mangwanani, saka haufanirwe kumira nguva refu mumutsetse.
Ndeipi Guta Ine Iyo Yakanyanya Kunaka Kurarama MuEurope Kwegore Idzva Uye Kisimusi?
Guta rakanakisa remapato eKisimusi uye yeGore Nyowani iri Berlin chaizvo kana uchifamba pane a zvakasimba bhajeti. Amsterdam nePrague zvakanaka pachando, asi zvishoma pricier.
Kupedza, Europe ine chimwe chinhu chekupa chero kuravira, kuda, mwero weuipi, uye bhajeti. Pamusoro pedu 5 maguta epati anopa zvakanakisa zvepasirese. Iwe unogona zvirokwazvo kutanga zvinyoronyoro ne bar hopping kana inogara mimhanzi makirabhu uye kuenderera kune yakasimbwa yekutamba pasi muEurope, zvese muusiku humwe chete. Kupfuura zvese, guta roga roga rinosvikika Via chitima famba, saka kana chiri chiroto chako chakashata kuva nemutambo unopenga svondo uye ushanyire vese 5, ipapo Europe yakamirira.
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvetiketi matikiti kune chero akanaka emapato emapati pane edu chinyorwa.
Iwe unoda here kubatisa blog yedu positi "5 Best Party Cities In Europe" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-party-cities-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / ja kuti / von kana / kes uye mimwe mitauro.
AmsterdamParty berlinparty budapestparty europenightlife europepartycity Nightlife pati PragueParty TravelVienna viennaparty